Jananinepal.comयौनका प्यासी हुन्छन ओठमा कोठी हुनेहरु / शरिरका कुन भागका कोठीहरुले के जनाउछ? - Jananinepal.com
यौनका प्यासी हुन्छन ओठमा कोठी हुनेहरु / शरिरका कुन भागका कोठीहरुले के जनाउछ?
जननीनेपाल सम्बादाता: मानिसको शरीरमा हुने सानो कालो थोप्लोलाइ कोठी भन्ने गरिन्छ। कोठीको बारेमा विभिन्न बिश्वास र मान्यता रहेकोछ। शरिरको जुन स्थानमा कोठिहरु रहेका हुन्छन त्यसको छुट्टै महत्त्व र मान्यता भएको बिश्वास मान्ने गरिन्छ ।
शरीरको कुन स्थानमा कोठी हुँदा कस्तो प्रभाव पर्छ त? -निधारमा कोठी हुनेहरू निकै बलवान् मानिन्छन। -दाहिने गालामा कोठी हुनेहरु एकदम भाग्यमानी हुने बिश्वास गरिन्छ। -बायाँ आखाको ढकनिमा कोठी हुनेहरुको दाम्पत्य जीवन सुखी नरहने बिस्वास गरिन्छ
-आखाको परेलाभन्दा मुनि आशु झर्ने ठाउँमा कोठी भएका मानिसहरू भने भाग्यमानी नहुने कुरा ज्योतिषीहरुले समेत भन्नेगरेका छन। -कानमा कोठी हुनेहरुको भने आयु छोटो रहेको ज्योतिषीहरुको भनाइ रहेकोछ। -दाहिने गालामा कोठी हुने मानिस धनी हुनेछ। -बायाँ गालामा कोठी हुने मानिस भने धेरै खर्चालु हुने गरेको पाइएकोछ। -त्यसैगरी ओठमा कोठी भएका मानिसहरु यौनका प्यासी हुनेगरेको बिश्वास र मान्यता रहेकोछ। -नाकमा कोठी हुनेहरु भने फिरन्ते किसिमका हुनेगरेको पाइएको छ।